पूर्वभरि फुटबलै फुटबल
विभिन्न प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन भैरहेको पूर्वमा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको अर्को एउटा प्रतियोगिता थपिएको छ । सुनसरीको इटहरीस्थित राष्ट्रिय जागृति क्लबको आयोजनामा पुसको दोस्रो सातादेखि अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण मदन भण्डारी मेमोरियल गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले ११ लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यो प्रतियोगितामा विभागीय टिमहरू, ए डिभिजन क्लबहरूका साथै भारतका टिमसहित १० वटा टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजक क्लबले जनाएको छ ।
चर्चित टिमहरूको सहभागितामा सञ्चालन भैरहेका ठूला र प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको आयोजनासँगै अहिले प्रदेश नम्बर १ फुटबलमय भैरहेको छ । अहिले यहाँ गाउँ, जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरका प्रशस्तै प्रतियोगिता सञ्चालनमा छन् ।
सुनसरीको दुहबीमा गत शनिबार दोस्रो मनमोहन दुहबी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भयो, जसमा मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबले विभागीय टिम नेपाल आर्मी क्लबलाई २–१ गोल अन्तरले पछि पार्दै उपाधि हात पार्‍यो । उपाधिसँगै मनाङले ४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्‍यो । उपबिजेता टिम नेपाल आर्मी क्लबले भने २ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझायो ।
झापाको काँकडभिट्टामा मंसिरको दोस्रो साता मेची नेत्रालय काँकडभिट्टा गोल्डकप फुटबल सम्पन्न भएको छ, जसको उपाधि विभागीय टिम नेपाल आर्मी क्लबले जितेको थियो । आर्मीले मनाङ–मस्र्याङदी क्लबलाई टाइब्रेकरमा ३–२ ले हराएको थियो ।
झापाकै झिलझिलेमा सताक्षी गोल्डकप सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसपालिको सताक्षी गोल्डकपमा आर्मी नै च्याम्पियन भयो । यो प्रतियोगितामा पनि आर्मीले मनाङ–मस्र्याङदीलाई २–१ ले निरास पारेको थियो ।
ठूला प्रतियोगिताको तयारी
इलाममा बर्सेनि माइभ्याली गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुन्छ । यसपटकको प्रतियोगिताका लागि तयारी अन्तिम चरणमा छ । २०५४ मा भूकम्पपीडित स्मृति कपको नामबाट प्रारम्भ भएको यो प्रतियोगिता बीचमा अवरुद्ध भएको थियो । यो प्रतियोगितामा विभागीय टिम तथा ए डिभिजनका सबैजसो टिमका साथै भारतको सिक्किम, भुटान तथा बंगलादेशका टिम समेत सहभागी हुने गरेका छन् ।
वि.सं. १९९० ताका सुरु भएको फुटबल खेल इलामका लागि अचेल पर्वजत्तिकै भएको छ । उतिबेला राणा शासकहरूले यो खेललाई इलाम भित्राएका थिए । इलाममा तत्कालीन बडाहाकिम महावीर शमशेरका नाममा स्थापित महावीर सिल्ड, कमल सिल्ड, ज्ञानीराम सिल्ड हुँदै भूकम्पपीडित कप फुटबल प्रतियोगितासम्म सञ्चालन भएको इतिहास छ ।
विराटनगरमा सञ्चालन हुँदै आएको विराट गोल्डकप भने अन्योलमा छ । २०१८ सालदेखि महेन्द्र गोल्डकपका नाममा आयोजित हुँदै आएको यो प्रतियोगितालाई विराट गोल्डकप ट्रस्टमा परिणत गरेर दुई वर्षअघि देखि पुन: प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न थालिएको थियो । यो प्रतियोगिताको विजेतालाई ५ लाख १ हजार रुपैयाँ तथा उपविजेतालाई ३ लाख १ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो ।
पूर्वको अर्को प्रतिष्ठित प्रतियोगिता धरानमा हुने बूढासुब्बा गोल्डकप हो । यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न विभिन्न प्रायोजकका साथै विदेशमा बस्ने धरानबासीले सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् । ताप्लेजुङमा कञ्चनजंघा च्यालेन्ज कप, पाँचथरमा फाल्गुनन्द गोल्डकप, सुनसरीमा भरौल गोल्डकप, उदयपुरमा उदयपुर गोल्डकप सञ्चालन हुने गरेको छ । सुनसरीमै क्षेत्रीयस्तरको भुटाहा गोल्डकप तथा धनकुटामा सहिद भीमनारायण गोल्डकप सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यसैगरी मदन आश्रित गोल्डकप–मोरङ, राराकप–धनकुटा, भलुवा गोल्डकप–सुनसरी, बराह गोल्डकप, सुरुंगा गोल्डकप, दमक गोल्डकप, डुम्राहा गोल्डकप, दुहबी गोल्डकप, नारदमुनि थुलुङ गोल्डकपजस्ता क्षेत्रीय तथा चर्चित प्रतियोगिता नियमित रूपमा आयोजित भैरहेका छन् ।
कसरी हुन्छ आयोजना ?
धरानको बूढासुब्बा, इलामको माई भ्यालीलगायत अन्य कतिपय प्रतियोगितालाई गोर्खा ब्रुअरीले प्रायोजित गर्दै आएको छ । विराटनगरकै उत्पादन रमपम चाउचाउ झापा गोल्डकप, दुहबी गोल्डकप, उदयपुर गोल्डकप लगायत धेरै प्रतियोगितासँग जोडिएको छ ।
आफ्नो जिल्ला/जन्मथलोमा हुने प्रतियोगिताका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि रकम संकलन गरेर पठाउने गरेका छन् । मलेसियामा रहेका इलामका बुद्धिमान राईसहितको समूहले गत वर्ष माई भ्याली गोल्डकपका लागि रकम संकलन गरेर पठाएको थियो । यसपटक पनि सहयोग संकलनको तयारी भैरहेको राई बताउँछन् । यसैगरी धरानमा सञ्चालन हुने बूढासुब्बा गोल्डकपका लागि हङकङ, सिंगापुर, बेलायत आदि मुलुकमा रहेका धरानेहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् ।